el pas de la CASA — တစ်လနေဖြင့်ရာသီဥတုက
ကမ္ဘာ့ဖလား Resorts နိုင်ငံများ အင်ဒိုရာ el pas de la CASA
el pas de la CASA — Canillo el pas de la CASA — တပ်ချ el pas de la CASA — Ordino el pas de la CASA — Arinsal el pas de la CASA — Soldeu el pas de la CASA — Escaldes el pas de la CASA — Andora la Vella el pas de la CASA — la Massana
ပျမ်းမျှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — 18.3°C သြဂုတ်လတွင်. ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — 11.7°C သြဂုတ်လတွင်. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာနေ့စဉ်သတင်းစာ — -1.6°C ဖေဖော်ဝါရီလက. ပျမ်းမျှနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာညဥ့်အခါ — -5.1°C ဖေဖော်ဝါရီလက.
အမြင့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 164.8 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ဇူလိုငျလ. နိမ့်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှု — 25.2 မီလီမီတာ ဒါဟာမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် ဒီဇင်ဘာလ.